छालामा चायापोतो दागधब्बा तथा रुखोपन देखियो ? हुनसक्छ यस्तो समस्या – Krazy NepaL
February 23, 2021 2999
-पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु पर्छ ।
-खानामा फलफुललाई समावेश गर्नु पर्छ।
-तनावबाट टाढा रहनु पर्छ । तनावले तपाईको अनुहारको चहकलाई कम गर्ने र अनुहार सम्बन्धि समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ ।
-अनुहार राम्रो बनाउनका लागि लागि अल्कोहल, चिनी, डेरी प्रोडक्ट्सहरुको सेवन गर्नु हुँदैन ।
-चिनीको धेरै प्रयोगले छाला सुख्खा तथा रुखो हुनुको साथै रौंछिद्र पनि बन्द गरिदिन्छ ।
Prevचिसोमा टन्सिलले सतायो ? यसरी घरमै गर्न सकिन्छ उपचार